Email Job Email Olee otú edere akwụkwọ ozi na UAE 🥇
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at Nwere ike 3, 2018
Ozi email na Dubai
Ozi email na Job ma mara otu esi ede ya n'ụzọ dị mma. Na Ụlọ ọrụ Dubai City na-enyere ndị na-achọ ọrụ aka otu esi ede ezigbo akwụkwọ ọrụ. N'ihi na tupu n'ọrụ manager ga-emepe akwụkwọ ozi email mbụ. Ụlọ ọrụ Dubai City inye aka mgbe nile n’ihe banyere esi achọta ọrụ na Middle East. I kwesịkwara ile anya Ntuziaka Forbes maka akwụkwọ edemede.
Ide akwukwo akwukwo ozi oma. N'ezie ya onye na-agbanwe egwuregwu na nyocha ọrụ. Karịsịa na United Arab Emirates na Qatar na Saudi Arabia. Ndị otu anyị na - enyere gị aka ide ederede zuru oke banyere ”otu esi ede ozi email na-emeri ọrụ. N'akụkụ dị mma, mgbe anyị ndu oma, ị kwesịrị ịma etu esi eme ya n’ụzọ ziri ezi. Dịka onye na-achọ ọrụ ọhụụ, ọ bụ iwu ịnweta akwụkwọ ozi mkpuchi dị ịtụnanya maka ọrụ na Dubai.
Ozi ngwa ngwa na akwụkwọ edemede si Mahadum Dubai nwere ike ịbara gị uru. Jide n'aka na ị ga-agbaso ntụziaka ndị ọkachamara nyere. Site na onwe gị, ị gaghị ama ama etu esi esi etinye ya ụzọ kwesịrị ekwesị Dubai maka ọrụ.
Esi edere Job n'ọrụ nke oma?
Akwụkwọ ozi bụ ọrụ kacha mkpa maka ụlọ ọrụ nchịkọta. Ha na-elele ngwa ọrụ. Mgbe ah onye na-ahụ maka ọrụ na-achọ ntinye emelitere. N'otu oge ahụ, ndị mmadụ na-ezipụ ozi anaghị ekpuchi ya. N'aka nke ọzọ, nke a bụ akwụkwọ ngwa ọrụ ma ga-eziga ya na CV. Na nzube nke ọrụ ọrụ bụ nyee Nchileke maka ihe omuma banyere oru na ihe omuma.
Ndị na-achọ Job mkpa ijikwa ezigbo ahụmịhe na nkà. Yabụ onye na-ewe ndị ọrụ n'ọrụ nwere ike ilele ahụmịhe gị ọsọ ọsọ ma dịkwa mfe. Ọzọkwa, nwee a lee akwụkwọ ozi mkpuchi dị na Dubai na Bayt.com. ọrụ ndi dinta choro inwe uzo puru iche iji hapughariri mmasi gi na oru nke ndi isi. Karịsịa maka ọrụ Emirates na Middle East.
Izipu akwụkwọ ọrụ dị ezigbo mkpa maka gbadata ịgba ajụjụ ọnụ maka ọrụ. N’oge ugbu a, ọtụtụ ndị na-ewe mmadụ n’ọrụ na-arịọ akwụkwọ ozi ka o nyere ha aka nye ndị na-achọ ọrụ ọrụ mkpụmkpụ maka oku ajuju nke ikpeazu. Tupu ị ghọta otu esi ede akwụkwọ ozi ọrụ, ka anyị hụ otu CV si dị iche na ya. Cheta akwụkwọ edemede ahụ ga-abụ tiketi gị iji nwee ihe ịga nke ọma.
Atụmatụ maka Job Ngwa maka ndị ahịa na Dubai
Dika okwuru, Resume lebara anya n’igosiputa ihe omuma banyere oru oru gi. Ihe ndị ị rụzuru n’ụlọ akwụkwọ gị na nke aka gị ma ọ bụ iru eru na nkọwa ndị akọwapụtara. Akwụkwọ ozi etinye n'ọrụ na-akọwa ihe niile banyere gị. Karịsịa mgbe gị na ngwa rute ebe nchịkwa na-akwụ ụgwọ. N'ikwu okwu, oge ọ bụla ị biputere ya ndị ọrụ. Kwesịrị ime ka ị bụrụ onye ga-ekwe omume maka imeghe oghere ọhụrụ.
Job tinye ya na-enyekwa ndị ọrụ ọrụ nghọta. Ihe mere ị bụ nwere mmasị n'ọrụ mmeghe. A ga-eme ka nchịkọta ọrụ onwe gị dị ka akwụkwọ ozi nke ụlọọrụ. N'ihi na nke a bụ otu ụzọ, otu ị si ajụ banyere ọrụ ahụ. Na ngwa oru maka ulo oru Middle East ekwesịrị ime ya n'asụsụ Bekee. N'ihi na ọtụtụ ndị ọrụ nchịkwa bụ ndị na-asụ Bekee.
Kedu ihe ndị nchịkọta na-achọ ngwa?
Emeela ozi email ngwa ngwa na CV zuru ezu?
Ị dị ka onye na-achọ ọrụ kwesịrị ịma ọtụtụ ihe banyere ngwa ngwa ahụ. Maka ihe karịrị ọtụtụ puku ngwa ngwa. Ndị dinta ọrụ akwadebe CV + akwụkwọ mpịakọta na-enweghị ntụpọ. N'oge ahụ, akwụkwọ ozi maka ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ kwesịrị ka eme ya otu ọ dị maka ngwa ọ bụla. Ọmụmaatụ, ị kwesịrị ịtụle ọtụtụ isi okwus na ngwa ọ bụla.
Ị nwere nkà zuru ezu iji hụ nkọwa ọrụ ahụ?. Ihe ka ukwuu n'ime ugwo ndi oru kama ịgabiga puku kwuru CV. Na-ele anya onye kachasị mma maka ọrụ ọ bụla. Ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ na-enyocha ndị otu kachasị mma. N'ikwu okwu n'ozuzu, ozugbo enwere ike. Akwụkwọ ozi ngwa ndị ahụ bụ ọsọ ọfụma na ntụkwasị obi iji nyochaa ma ọ bụrụ na nwa akwukwo na-akwado ihe eji agba ụgwọ. Mgbe ahụ ndị ọzọ na-achọ ọrụ ga-aghọta ihe ruru eru maka ohere imeghe.
Gbaa mbọ hụ will ga-adị njikere izute nkọwa ọrụ ahụ. Maka na ndị na - ahụ maka ọrụ ego na - achọ ndị aga - eme nke ọma tupu a kpọọ ha. Ka ị na-etinye maka ọrụ ọ bụla. Ị ghaghị ijide n'aka na ị nwere ahụmahụ zuru oke maka ohere ahụ ị na-etinye. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-achọ maka ụlọ ọrụ yiri nke ahụ. Ị ga - enwe ohere ka elu ịchọta ọrụ na India.
Jụọ onwe gị ajụjụ kacha mkpa? Kedu ihe na-eme ka ị pụọ na ndị ọzọ ?. Na-ekwukarị, akwụkwọ ozi ọrụ ọhụụ na-edenye ndị isi ọrụ. Na-enyere aka ọ bụla nwa akwukwo iru ndị nwere ike iwere ọrụ. N'akụkụ na-adịghị mma, ị ga-eji ahụmịhe ọrụ gị tụnyere ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, ndị na-achọ ọrụ na MBA ahụmahụ. Ma, ịkwesịrị ịgụnye nkọwa ndị ga-enyere gị aka iru ndị ọrụ nchịkwa. N'iburu nke a n'uche, ngwa ngwa gị maka ịdebanye aha gị kwesịrị ịga nke ọma.
Kedu ka esi ele ndị ọrụ nchịkọta anya anya?
Naanị, azịza ya maka nke a bụ: ị ga-emerịrị nwee ezigbo ahụmịhe. Nke ahụ doro anya na naanị ụzọ iji nweta ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị were onye nwere akụkọ ogologo oge. Ònye nwere ọrụ maka ọbụlagodi afọ 5 ?. Nke ahụ bụ n'ezie ụzọ isi jide ndị ọrụ nchịkọta. Ndị na-achọ ọrụ enwe ihe karịrị 10 afọ nke ahụmahụ nwere ụzọ dị ngwa iji nweta ọrụ nrọ. N'akụkụ ọjọọ, ndị gụsịrị akwụkwọ ọhụrụ na MBA nwere nlezianya ga-arụsi ọrụ ike.
Ụzọ ọzọ ị ga-esi nweta ndị ọrụ bụ ịchọta akwụkwọ ozi ederede. Nke a bụ a ụzọ dị mma iji jide ndị nlekọta ọrụ nlekọta anya. N'uzo nile, oru gi bu ijide n'aka ndị na-akwụ ụgwọ ọrụ. Ihe ọ bụla CV ọ bụla ọ ga-abụ, ọ ga-adịrịrị mma nke ọma na ndị isi. Agencieslọ ọrụ ndị na - ewe ndị ọrụ, nwekwara azụmahịa ebumnuche. ebe ndi nwere ike choro ka osiso maka ohere ịnọ na Dubai. Yabụ kedu onye ga-abụ onye mbụ. Onye ga-ajụ obere ụgwọ ọrụ !. Ya mere, ọ bụ ihe nzuzo ahụ. Ndị na-erughị ya ị ga - ewere nke kachasị ọsọsọ na ị ga - enweta ọrụ.
Ihe ịgbakwunye Job Ngwa
Ọrụ ọrụ maka ohere ọ bụla ị na-etinye. Kwesịrị ịmalite site na akwụkwọ edemede nke na-ekwu banyere nkọwa niile dị mkpa. Na n'ezie kwesịrị kpọtụrụ ọnọdụ ma ọ bụ ọrụ ọrụ na-eme ihe ma bụrụ ndị a kapịrị ọnụ. Akwụkwọ ozi email Job ga-amalite site na ekele nke aha, aha nna nke onye nnata, ya bụ, onye ọrụ ma ọ bụrụ na ị maara.
Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, ọ ga-aba uru ịkọwapụta. Na ị ga-enweta iru eru kachasị elu maka ọnọdụ ahụ. Ebee ka ị chọtara ọrụ a? Ihe ọzọ dị mkpa, kwesịrị ịkọwa ihe kpatara ya onye na-anabata ma ọ bụ onye njikwa nke onye ọrụ ebere kwesịrị ịgbaso ngwa gị. Smartzọ amamihe dị na ya bụ ịrịọ onye na-agụ akwụkwọ (onye na-ahụ maka ọrụ) ka ọ gaa n’ihu ịgụ akwụkwọ ozi ngwa ọrụ maka ozi ndị ọzọ. Otu esi akpọtụrụ gị, na ihe ị nwere ike inye ndị were gị n'ọrụ.
Ihe mbụ ị ga-echeta bụ paragraf na-esonụ. Maka ịmepụta ahụmahụ onwe onye mere i ji nwee mmasị izipụ ngwa gị maka ohere nke onye ọrụ. Ọzọkwa, gbalịa ụzọ mkpirisi na ịkekọrịta ihe ndị nwere ike nyere gị aka kwado ngwa gị maka nhọrọ ziri ezi.
Ngwa Ọrụ na Ụmụ akwụkwọ
Ebum n'uche a ụmụ akwụkwọ ọhụrụ gụsịrị akwụkwọ. O doro anya na ị ghaghị ịkọ banyere ahụmahụ mmụta ahụ na otu esi enweta ha. Ọrụ ọrụ afọ ofufo ya, ma ọ bụ ọbụna ọrụ oge-oge ọ na-enye? Ihe niile a ga - enyere ndị ọhụrụ aka na - elekọta ha aka isi ihe na-eme n'ịchọ ọrụ. Ndị ọkachamara kachasị nwee ahụmahụ n'ihi ha arụ ọrụ. Kwesịrị ịkọpụta ahụmịhe ọrụ mba na mba na otu esi bulie ha. N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, email akwụkwọ ọrụ ọ bụla. Kpamkpam kwesịrị banyere ọrụ ndị tara akpụ ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ arụcharala arụ n’oge gara aga.
Paragraf ikpeazụ ga-ejedebe akwụkwọ ozi ahụ n'ụzọ ekele. Maka onye na-achọ ọrụ ma ọ bụ onye njikwa n'aka onye ọrụ ebere kwesiri igosi onye guru akwukwo maka iweputa oge iji lee akwukwo akwukwo ozi ha.
Ihe nyocha nke ọrụ na Dubai
Dubai Companylọ ọrụ obodo jisiri ike mee ndebiri ahụ maka ndi n’acho oru. Na-ekwukarị, ị nwere ike ịgbaso ntuziaka a imeghe Ọrụ na-emeri Akwụkwọ Ozi. N'okpuru ebe a, ị ga-enwe akwụkwọ ozi na-enye mmeri. Akwụkwọ ozi nchekwa dị n'okpuru ebe a ka onye ọrụ gọọmentị anyị. N'ezie, mgbe ị na-eji ya na ngwa ọrụ gị email ị ga - abawanye ohere itinye. Naanị n'ihi na ọ bụrụ na a nwalee ihe ọ ga-arụ ọrụ. Email akwụkwọ ntinye n'ọrụ kwesịrị ịnwe ozi zuru oke na Dubai.
Mgbe ndị na-achọ ọrụ anyị jiri ya ma ziga ya ndị isi ụlọ ọrụ ahụ. Ha nile ejiriwo mekwuwanye ihe site n'aka onye nchịkwa mmadụ. N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, ọ bụrụ na ị na-achọ akwụkwọ ozi mkpuchi zuru oke. Biko jiri nke dị n'okpuru wee nwaa iji nweta ọrụ ozugbo ị nwere ike. Ndị otu anyị ga-enwe obi ụtọ karịa ma ọ bụrụ na ị ga-eji ya na ị ga-enweta ọrụ ọrụ ọhụrụ. N'okpuru, ị na-enwe Email Ngwa kob. Na otu esi ede leta ndi banyere ya UAE.
Ihe nlele nke Job Application Email na Dubai
Maka uche nke ọrụ nchịkọta
Ezigbo onye / Sir,
Ana m edetu ihe omumu m na ihe omuma nke oma dika ........................ na onye oru nhazi mpaghara. Ekwenyere m na m nwere nkà, iru eru na ahụmịhe dị mkpa iji mee onyinye dị oke mkpa na ọrụ gị.
Mụ na onye ọrụ m ugbu a ...................... M ga-aza ajụjụ maka mpaghara 12 nke azụmahịa, na-arụ ọrụ na asọmpi kachasị asọmpi nke na-eme ka m ghọta otú mkpa ndị ahịa si dị mkpa na ịmepụta ika ahụ iji chọpụta ahịa. N'ọzụ ahịa a, m meziwanye ego site n'ịkụzi, ịzụlite, ọzụzụ na ịjụ ajụjụ maka ndị na-enye ego na-enye m mmezi + 20k kwa izu.
Enwere m ezigbo ahịa na-akpali akpali. Dịka ị ga-ahụ site na CV mbata, na arụ ọrụ m ugbu a, enyewo m mmụba dị ukwuu nke ahịa na -60% na + 20% ibu site na-eduzi nyochaa ego na ị nweta nnukwu ego dị elu ma na-echekwa ego furu efu na azụmahịa.
Enwekwara m ike ịmalite ma mechie 19 ọhụrụ ............ .. azụmahịa n'ofe ............ ............. na onye ọrụ na-aga n'ihu, ndị a nile enweela ihe ịga nke ọma ma tinyefe ego nkwụnye ego nke £ 12 m. Ihe omuma m mụtara na nchịkwa njikwa nke ógbè ahụ pụtara na m nwere ike iji nwayọọ nwayọọ na-enwe nrụgide ma mepụta talent nke onye ọrụ m, nkà m na-eme atụmatụ ịzụ ahịa dị elu.
Ana m achọ ugbu a ọnọdụ ọhụrụ siri ike ebe m nwere ike ịnweta nkà na ahụmahụ m na ebe m nwere ike ịmalite ma mepụta ọkachamara.
Biko egbula ịkpọku m na 44 (0) 745 399 0000 anyị nwere ike ịhazi ndokwa iji kwurịta ngwa ngwa m.
Ụfọdụ Ihe Ndenye iji Cheta na ngwa
Jide n'aka na ị ga-agbakwunye na ị nwere mmasị na ajụjụ ọnụ na mbinye aka.
Kwuo aha onye nchịkọta ma ọ bụ onye ọrụ njikwa.
A ga-enyocha ọrụ Job abụọ.
Tinye ozi ịchọrọ ịza ajụjụ.
Nweta akwukwo na i nwere ike ibido ozugbo gi nyochaa.
Lelee otutu CV ugboro ugboro, jiri Grammarly ngwa mgbakwunye na mmalite gị iji jide n'aka na ọ bụ n'efu.
Aha Mbụ na kọntaktị
Ọ dị mma, gbaa mbọ a ga-adụ gị ọdụ Ka idobe aha ọrụ na kọntaktị kọntaktị emelitere. Oge ọ bụla ị na-ede ihe ọmụma zuru ezu. Should ga-akpọ aha aha nnata nke ndị were gị n'ọrụ. Na ya, gbalịa inye ya aka nke ọrụ ọ bụla email. Ụzọ kachasị mma bụ ịme ya onwe ya. N'agbanyeghị onye ị na-ezipụ ngwa gị. Gbalịa ịkọ aha na ọ bụrụ na nnabata nwere ike. Ọzọkwa, ị nwere ike ọbụna mara aha nke n'ọrụ. Gbalịa ịkọwa nkọwa niile, ọbụna site na mgbasa ozi. Chọpụta ihe banyere ụlọ ọrụ na Linkedin ma mee ya.
Emela ka oyiri nke Resume gị
Cheta, ọ dịtụbeghị mgbe i mepụtara otu mbido gị. Dịka akwụkwọ ozi na onye njikwa ọrụ. N'ihi nke a, bụ Gbanwee na Linkedin, agbakwunyela ahụmịhe ọzọ na isi ihe mgbakwunye kachasị. Gbalia idobe ya mgbe niile. Ọtụtụ ndị isi ọrụ na-enye ihe dị mfe ma bụrụkwa ihe ọmụma. Gbaa mbọ hụ na isi ihe dị na isi leta ozi ngwa gị dị mma ma dị mfe ọgụgụ. Dị n'aka na ịgbakwunye ozi zuru ezu. A ghaghị ịkpọ ya na CV.
Na-elekwasị anya na onye ị bụ
Ihe bụ isi bụ ka ị na-eche echiche mbụ. Maka maka ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ ọ nwere ike ịbụ echiche ikpeazụ. Mana ihe niile na-atụle akwụkwọ ozi maka akwụkwọ ọrụ. Gbaa mbọ hụ na ị ga-agbakwunye isi mgbakwunye yana oghere mmeghe. Gbalịa ike mgbe niile ike nke mmechi ahịrị dịkwa mkpa maka ndị njikwa HR. Na njedebe, ndị were gị n'ọrụ ga-enwe ike ịchọta onye ga-eme n'ọdịnihu. Ma mb youe inwere ihe nile, o gha buru gi. Isi ihe a na-elekwasị anya kwenye n'aka onye njikwa ma obu onye nwere ike ichota. Naanị ịdebanye akwụkwọ ozi akwụkwọ ozi gị ma zigara ụlọ ọrụ ahụ. Kama izipu ya na mail mail.
Nọgidenụ na-amaliteghachi na Okwu ma ọ bụ DOC
CV gị kwesịrị ịdị na WORD ma ọ bụ DOC. n'ihi na ndị ọrụ na-achọ ọrụ na-emekarị, bụ ụdị PDF. Ka anyi chee na onu ego a ga enwetaghachi azu. Na-achọ ịgbanwe obere nko. O doro anya na ọ ga-esiri ya ike ijikwa ya na PDF. Ụzọ kachasị mma bụ ịkwado ụdị okwu. I nwedịrị ike ịnwe lelee ụzọ Microsoft maka Linkedin. Ọ bụ ụzọ kacha mma iji nyere ndị na - ewe ihe n'ọrụ aka. Ọ bụrụ na i nyere ha aka ịghọta gịnị? Ha ga goro gi ego ebe a!.
Nkwupụta Linkedin dị mkpa
Ọ dịghị nke ndị ọrụ na ndị ọrụ ego nwere mmasị n'ịgụ ihe mmalite na-adịghị mkpa. Ụzọ kacha mma bụ jiri Linkedin maka CV. Ya mere, na usoro ihe a. Ị gaghị eme ka ogologo akwụkwọ ozi gị dị elu. Ndị na-elekọta ọrụ ga-enwe ike ikwenye ahụmahụ gị na ndị ọzọ na mgbasa ozi mgbasa ozi. Imirikiti ihe ọmụma banyere Linkedin. O doro anya na ị ga - enwe naanị nkọwa ndị na - eme kwado nhọrọ ị na-eji kpọọ oku.
Mgbe ị na-ede profaịlụ gị na Linkedin. Biko gbalịanụ ime ka ọ dị mkpirikpi ma rapara naanị na isi ihe ndị dị mkpa. E tinyekwa nkọwa ụfọdụ na-adịghị mkpa dịka ụlọ akwụkwọ basketball maka ụmụ gị. Edokwala foto na nwa gị ma ọ bụ nkịta. Ọ bụ usoro ọkachamara sitere na A ruo Z. Mgbasa ozi na - elekọta mmadụ na - elekọta mmadụ mgbasa ozi. Ọ gaghị enyere akwụkwọ ozi gị aka iji nwee ihe ịga nke ọma na Dubai.
Naanị ụzọ isi na-agafe ezigbo ndị ọrụ. A ga - eme ka o jiri aka ya weputa CV gi na Linkedin. Na mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, ha ga-ele anya dị ka ọkachamara, ma hapụ ohere kwesịrị ekwesị n'etiti ahụmịhe gị. Gbaa mbọ hụ na enwereghị njehie ma ọ bụ asambodo ọ bụla. N'ihi na ndị na-akwụ ụgwọ ọrụ na-ele anya na.
Nkọwa maka Job Ngwa Email
Anyị abịarutewo na njedebe, na njedebe na anyị jikwaa ya obere. Mgbe niile debe ụzọ ọkachamara. Gbaa mbọ hụ na ejikọtara Linkedin gị ma maliteghachi inwe otu ihe ahụ. Debe ya naanị ozi ziri ezi etinyekwa ahụmịhe na-adịghị mkpa na ozi-e ngwa ọrụ gị. Na-echekwa ya mgbe niile, tinye aha ndị ọrụ, tinye ụlọ ọrụ ị na-etinye na zitere email gị naanị ọrụ ọrụ dị mkpa. Ihe niile kwesiri enyere gị aka inweta ọrụ nrọ gị.
Site na saịtị anyị, ọ bụ ihe niile ị chọrọ. Biko jiri akwụkwọ ozi mkpuchi anyị, ka anyị mara otú ọ si aga. Anyị bụ mgbe niile agbalị inyere ndị na-achọ ọrụ aka inweta ọrụ nrọ.
Dubai City Company ugbu a na-enye ezigbo nduzi maka Ọrụ. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ndị njem Dubai. Yabụ, site na nke a n'uche, ị nwere ike nweta ugbu a nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates ya na asusu gi.